Waa wax lagu farxo sida Diiwaanka Seychelles In ka badan 100,000 oo Soo -booqdeyaal ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Waa wax lagu farxo sida Diiwaanka Seychelles In ka badan 100,000 oo Soo -booqdeyaal ah
Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Seychelles waxay soo dhaweynaysaa socotada ka yimaada Israel
Rakaabkii ka soo safrayay Israa’iil ayaa u soo degay garaacyadii farxadda badnaa ee durbaannada moutya ee maxalliga ah iyo daawashada qoob -ka -ciyaarka dhaqanka Axaddii, Sebtember 19, 2021, galabnimadii iyada oo meeshii Seychelles u socotay ay diiwaangelisay in ka badan 100,000 oo booqdeyaal ah maanta.
Rakaabkii ka soo degay duulimaadkii El Al ee LY055 oo ka yimid Tel Aviv ayaa lagu daweeyay dhadhanka martigelinta Creole ee jasiiradda.
Dhacdadani waa mid muhiim u ah halka loo socdo maadaama tirooyinku muujinayaan in dadaalladii ay geliyeen dawladda iyo la -hawlgalayaashu ay midho dhaleen.
Seychelles waxay ka mid ahayd meelaha ugu horreeya ee loo furo dalxiiska iyada oo aan loo eegin tallaalka booqdayaasha.
Iyada oo qayb ka ah soo dhaweynta gaarka ah ee loogu dabbaaldegayo dhacdadan muhiimka ah ee 2021, rakaabkii ka soo degay duulimaadkii El Al LY055 ee Tel Aviv ayaa loola dhaqmay dhadhaminta martigelinta Creole ee jasiiradda, iyo sidoo kale inay ka helaan calaamad mahadnaq ah Waaxda Dalxiiska ee dalka.
Marwo Bernadette Willemin, Agaasimaha Guud ee Suuqgeynta Goobta, oo ka hadashay gegida caalamiga ah ee Seychelles ee Pointe Larue, ayaa sheegtay in dhacdadani ay tahay mid muhiim u ah halka loo socdo maadaama tirooyinku muujinayaan in dadaallada ay geliyeen dawladda iyo la -hawlgalayaashu ay yihiin kuwo miro -dhal leh.
“Maanta waxay calaamad u tahay bilowga cutub muhiim u ah soo kabashada warshadeena dalxiiska. Seychelles wuxuu ku socdaa wadadii saxda ahayd si uu ula kulmo saadaasha ay samaysay Waaxda Dalxiisku Janaayo 2021. Diiwaangelinta in ka badan 100,000 oo booqdeyaal ah ayaa nagu xaqiijinaysa shaqada wanaagsan ee dhammaan la -hawlgalayaashu samaynayaan si ay gacan uga geystaan ​​soo -kabashada. Waxaan bogaadinayaa adkeysiga shuraakadayada warshadaha iyo ururrada kale ee ka qayb qaatay guusha maalintan, ”ayay tiri Marwo Willemin.
Mid ka mid ah meelaha ugu horreeya ee loo furi karo dalxiiska iyada oo aan loo eegin xaaladda tallaalka booqdayaasha ka dib olole tallaal oo xooggan oo waddanka oo dhan ka socda oo muwaadiniintiisa iyo dadka deggan, tababbarka hawl -wadeennada warshadaha dalxiiska ee hab -raaca caafimaadka iyo badbaadada, iyo istaraatiijiyaddiisa furitaanka suuqyada kale ee isha, yimid Seychelles ayaa la filayaa inay sii kordhaan.
Soo noqoshada maraakiibta yaryar ee bisha Oktoobar iyo nasinta tallaabooyinka adduunka oo dhan, ugu yaraan suuqyadeeda dhaqameed ee Galbeedka Yurub, ayaa la filayaa inay sare u qaadaan imaatinka dalxiiska.
6 -da suuq ee ugu horreeya sannadka 2021, sida ku cad xogta ay bixisay Xafiiska Qaranka ee Tirakoobka, waxaa ka mid ah Ruushka, Imaaraadka Carabta (UAE), Israel, Jarmalka, Faransiiska, iyo Sacuudi Carabiya.
Waqtigan xaadirka ah, meesha loo socdo waxaa u adeegaya 10 shirkadood oo ganacsi oo ay ku jiraan Air Seychelles, diyaaradeedii qaran, oo dib u bilaabi doonta duulimaadyadeedii Koonfur Afrika laga bilaabo Sebtember 26, 2021.